Intel က 8265 8265NGW WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN ကဒ်ကို Windows ယာဉ်မောင်းဆော့ဝဲဒေါင်းလုပ် | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
Intel က 8265 8265NGW WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN ကဒ်ကို Windows ယာဉ်မောင်းဆော့ဝဲဒေါင်းလုပ်
ဇွန်လ 4, 2017 admin ရဲ့ မောင်းသူ, ကြိုးမဲ့စက် 0
Intel 8265 မောင်းသူ >>>
အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. ယာဉ်မောင်းသူသာနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူIntel® PROSet / ကြိုးမဲ့ဆော့ဝဲများအတွက် download, ရွေးချယ်မှုများပါဝင်သည်.
device ကိုမော်ဒယ်: 8265 စီးရီး
Intel® PROSet / ကြိုးမဲ့ Wi-Fi Software များအဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြုသည်, အဆင့်မြင့်အိုင်တီအုပ်ချုပ်ရေးမှူး tools တွေကိုမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့သူအိမ်တွင်အသုံးပြုသူများနှင့်စီးပွားရေးဖောက်သည်များအပါအဝင်.
သင့်ရဲ့ PC မှာတစ်ဖိုင်တွဲဖိုင်ကို Download လုပ်. installation ကိုဖွင့်ဖို့ဖိုင်ကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ.
operating စနစ်များ: (စကားဝှက်ကို : os-ကြီးများ)
Windows ကို 98 / 2000 (နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမထောက်ခံအားပေး)
Windows XP ကို (နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမထောက်ခံအားပေး)
Windows Vista က (နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမထောက်ခံအားပေး)
Windows ကို732-bit နဲ့ : Dowload
Windows ကို764-bit နဲ့ : Dowload
Windows ကို 8 32-bit နဲ့ : Dowload
Windows ကို 8 64-bit နဲ့ : Dowload
Windows ကို 10 32-bit နဲ့ : Dowload
Windows ကို 10 64-bit နဲ့ : Dowload
ဒီနေရာမှာပိုများသော Intel ကြိုးမဲ့စက်ကို infomation ခရီးစဉ်.
OS ကို-STORE ပံ့ပိုးမှု
ငါ၏အ site ကိုမှ ပို.
Intel က WiMax 5150 512ANX 512AGX WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN Card ကိုယာဉ်မောင်းများနှင့် Software များဒေါင်းလုပ်
Intel က 100BG 100 ဘီလီယံ WIFI ကြိုးမဲ့-N ကို WLAN Card ကိုယာဉ်မောင်းများနှင့် Software များဒေါင်းလုပ်
Intel က 5300 533AN WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN Card ကိုယာဉ်မောင်းများနှင့် Software များဒေါင်းလုပ်
Intel က 8260 8260NGW AC အ WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN Card ကို Windows ကယာဉ်မောင်းဆော့ဝဲဒေါင်းလုပ်
Broadcom BCM943227 BCM43227 WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN ကဒ်ကို Windows ယာဉ်မောင်း Download
Intel က WiMax 5350 533ANX WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN Card ကိုယာဉ်မောင်းများနှင့် Software များဒေါင်းလုပ်
ပြတင်းပေါက် updated Atheros Qualcomm ကြိုးမဲ့စက်ကိုမောင်းသူ 10 OS ကို-STORE အားဖြင့်
HDD SSD ကို Partition ခွဲဆော့ဝဲ Manager က Tool ကို
သငျသညျဖွစျရမညျ အတွက် logged မှတ်ချက် post မှ.
အမှား: မကိုက်ညီသည့် get တောင်းဆိုချက်အရ. https မှာဇယား API ကိုစာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ရှုပေးပါ://developers.facebook.com/docs/graph-api
ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု device ကိုမော်ဒယ် စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ OS ကို-STORE စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု မိုဘိုင်းဖုန်း ပရိုဆက်ဆာ ဥပဒေရေးရာအနက် 64-နည်းနည်းက Windows Intel က HD Graphics HTC က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် နည်းပညာ Software များ Technology_Internet Nokia က စီပီယူ processor ​​ကို Samsung က
စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု 64-နည်းနည်းက Windows processor ​​ကို စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု HD Graphics Qualcomm မှ Technology_Internet Sony Ericsson က OS ကို-STORE Samsung ရဲ့ Galaxy Samsung က Intel က Server ကို Intel က စီပီယူ device ကိုမော်ဒယ် မိုဘိုင်းဖုန်း ဥပဒေရေးရာအနက် ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Nokia က ပရိုဆက်ဆာ HTC က Software များ နည်းပညာ စမတ်ဖုန်းများ